Print Page - Manisha Koirala - Photo profile
xNepali Forum => Celebrity profile => Topic started by: xyz on September 04, 2008, 10:32:03 AM
Title: Manisha Koirala - Photo profile
Post by: xyz on September 04, 2008, 10:32:03 AM
Title: Re: Manish Koirala - Photo profile
Post by: xyz on September 04, 2008, 10:32:35 AM
Post by: xyz on September 04, 2008, 10:33:05 AM
Post by: xyz on September 04, 2008, 10:33:28 AM
Post by: xyz on September 04, 2008, 10:33:46 AM
Post by: xyz on September 04, 2008, 10:34:27 AM
Post by: xyz on September 04, 2008, 10:35:41 AM
Post by: xyz on September 04, 2008, 10:35:59 AM
Post by: xyz on September 04, 2008, 10:36:15 AM
Post by: xyz on September 04, 2008, 10:36:35 AM
Post by: xyz on September 04, 2008, 10:36:48 AM
Post by: xyz on September 04, 2008, 10:37:03 AM
Post by: xyz on September 04, 2008, 10:37:26 AM
Post by: xyz on September 04, 2008, 10:37:39 AM
Post by: xyz on September 04, 2008, 10:38:02 AM
Post by: xyz on September 04, 2008, 10:38:12 AM
Post by: xyz on September 04, 2008, 10:38:23 AM
Post by: xyz on September 04, 2008, 10:38:36 AM
Post by: xyz on September 04, 2008, 10:39:12 AM
Post by: xyz on September 04, 2008, 10:39:23 AM
Post by: xyz on September 04, 2008, 10:39:36 AM
Post by: xyz on September 04, 2008, 10:39:47 AM
Post by: xyz on September 04, 2008, 10:39:57 AM
Post by: xyz on September 04, 2008, 10:40:17 AM
Post by: xyz on September 04, 2008, 10:40:48 AM
Post by: xyz on September 04, 2008, 10:41:10 AM
Post by: xyz on September 04, 2008, 10:41:37 AM
Post by: xyz on September 04, 2008, 10:41:48 AM
Post by: xyz on September 04, 2008, 10:41:59 AM
Post by: tundikhel on December 25, 2008, 02:54:34 PM
Post by: tundikhel on December 25, 2008, 02:56:02 PM
Manisha: with Sunil and Saif
Manisha Koirala:on the cover of Stadust
Post by: tundikhel on December 25, 2008, 02:56:42 PM
Title: Re: Manisha Koirala - Photo profile
Post by: kurakani on December 27, 2008, 11:38:45 PM
Budheskal lagyo! (2007 photos)
Post by: kurakani on February 26, 2009, 10:55:03 AM
Post by: nish on February 26, 2009, 12:59:42 PM
Post by: tundikhel on July 21, 2009, 10:51:47 AM
Post by: S1nner on July 21, 2009, 06:53:55 PM
Quote from: kurakani on February 26, 2009, 10:55:03 AM
yesma ta nips pani dekhincha ta ;D
Post by: tundikhel on August 24, 2009, 05:06:56 AM
Latest (July 2009) Photoshoot of Manisha - she still is hot!
Post by: tundikhel on August 24, 2009, 05:07:20 AM
Post by: tundikhel on August 24, 2009, 05:08:15 AM
She sure has lost weight - and looking sexy!!
Post by: tundikhel on August 24, 2009, 05:08:53 AM
Post by: tundikhel on August 24, 2009, 05:11:31 AM
Post by: tundikhel on August 24, 2009, 05:12:32 AM
Post by: tundikhel on August 24, 2009, 05:13:03 AM
Post by: tundikhel on August 25, 2009, 01:12:03 AM
Post by: tundikhel on September 30, 2009, 12:14:45 PM
Post by: bisbrow on September 30, 2009, 12:27:00 PM
Post by: tundikhel on October 18, 2009, 08:53:31 AM
हिन्दी फिल्मकी नेपाली अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले राजनीतिमा आइहाल्ने विषयमा आफूले सोचिनसकेको बताएकी छिन्। तिहारका लागि काठमाडौं आएकी कोइराला शनिबार दिउसो विपी स्मृति संग्राहलयको भ्रमण गर्न सुन्दरीजल पुगेकी थिइन्।
बा १ च ७५३७ नम्बरको ट्याक्सीमा बाबु प्रकाश कोइरालाका साथ सुन्दरीजल पुगेकी कोइरालाले 'राजनीतिमा आउँदिन होला' भन्ने प्रतिक्रिया दिइन्। 'तत्काल राजनीतिमा आउने सोच छैन,' कोइरालाले भनिन्, 'तर के थाहा भोलि आउन पनि सकिन्छ।'
आफ्ना हजुरबुबा बिपी कोइरालाले प्रयोग गरेका सर सामान, तस्विर र पुस्तक, हस्तलिखित सामाग्रीहरु जतनसँग राखिएकोमा कोइरालाले गर्व गरिन्। उनले नेपाली राजनीति र सघर्ष बुझ्नलाई संग्रहालय उपकारी भएको भन्दै त्यसको संरक्षणमा आफ्नो पनि योगदान रहने बताइन्।
कांग्रेसका कार्यबहाक सभापति सुशिल कोइरालाले मनिषालाई संग्रहालयको विषयमा जानकारी गराएका थिए।
(आइतवार, 18 अक्टोबर 2009 08:15 नागरिक )
Post by: tundikhel on October 22, 2009, 05:12:28 AM
हलिउडमा मनीषा ---- not the hollywood you would think :D
काठमाडौ, २०६६ कार्तिक ४ - बलिउड अभिनेत्री मनीषा कोइराला मंगलबार मध्याह्न बाबु प्रकाश र आमा सुष्मा कोइरालाका साथ हलिउड पुगिन्, उद्घाटन गरिन् र फर्किइन् ।
यहाँ उल्लेख गरिएको हलिउड विश्वकै ठूलो फिल्म उद्योग होइन, केही समयअगाडि ठमेलमा खोलिएको सैलुन हो । मनीषालाई हलिउड सैलुनसम्म ल्याइपुर्‍याउन त्यसका सीईओ विजय सिंखडाले सञ्चयकोष भवनसम्म पुगे । रिबन काटेर उद्घाटन गर्नसाथ उनले हलिउडको एकसरो निरीक्षण गरिन् र भनिन्, 'भेरी नाइस ।' हुन पनि विजयको यो युनिसेक्स सैलुनमा महिला र पुरुषका लागि छुट्टाछुट्टै पार्लरमात्र होइन, बालबालिकाका लागि विशेष व्यवस्था छ । केस काट्न डराउने केटाकेटीहरूलाई सैलुनमा भएको छुट्टै कोठामा गाडीमा नभए प्लेनमा चढाएर चिटिक्क पार्ने व्यवस्था छ । यसबारे मनीषाले भनिन्, 'बि्रलियन्ट आइडिया, यहाँ प्रत्येक आमा आफ्ना नानीसँग आउन सक्छन् ।'
हेर्दा उच्च वर्गका लागि खोलिएको जस्तो देखिए पनि हलिउडको सेवा भने त्यस्तो महँगो नभएको विजयको भनाइ छ । जस्तो, यहाँ पुरुषले केस काटेको ९० रुपैयाँमात्र लाग्छ । मनीषाले पनि विजयले उच्चमात्र होइन, मध्यम वर्गका ग्राहकलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने सल्लाह दिइन् ।
चार दिनअगाडि तिहार मनाउन नेपाल आए पनि केही भारतीय सञ्चार माध्यमले मनीषा राजनीतिमा लाग्न स्वदेश फर्किएको समाचार प्रकाशन गरेका छन् । 'हो, हजारौं मानिसले मलाई तिमी नेपाल गएर राजनीतिमा लाग्छौ भन्ने प्रश्न गर्छन्,' उनले भविष्यबारे बताउन नसक्ने उल्लेख गर्दै भनिन्, 'तर, मलाई राजनीतिबारे केही थाहा छैन । म यतिखेर पूर्णतः गैरराजनीतिक मानिस हुँ ।'
करिब आधा घन्टा हलिउडमा रहेकी मनीषाले कफी होइन चिया खाइन् र नेपाली फ्यानहरू- सँग फोटो खिचाइन् ।
(source - kantipur)
Post by: tundikhel on October 24, 2009, 12:02:02 AM
Post by: tundikhel on October 24, 2009, 12:09:56 AM
Post by: tundikhel on October 24, 2009, 12:12:55 AM
तपाईले आफ्नो पिता प्रकाश कोइरालाको राजनीतिलाई कसरी लिनुभएको छ नेपाली काग्रेसले निष्कासन गरिदिएको छ राजाको शासनमा मन्त्री हुनुभयो । उहाँको राजनीतिक भविश्य कस्तो छ ?
-पहिला काग्रेसले निष्कासन गरेकाले नै उहाँ उता शाही शासनका बेला मन्त्री हुनुभएको हो । उहाँले फरक विचार राखेकैले काग्रेसले कारबाही गरेको हो । मलाई लाग्छ-ड्याडी ठिक हुनुहुन्छ आफ्नो विचारमा विचलित हुनुहुन्न । प्रजातान्त्रिक पद्धतिप्रति अडिग हुनुहुन्छ । जसले फरक मत सुन्दैन त्यो प्रजातान्त्रिक पार्टी हुन सक्दैन । फरक विचारकै कारण पार्टीबाट निकाल्नु ठिक होइन त्यो गलत कदम हो । शेरबहादुर देउवालाई पनि निकालियो । त्यो पनि गलत कदम थियो । यस्तै गल्ती दोहोर् याएकैले नेपाली काग्रेसको स्थिति कमजोर भएको हो ।
तपाईले यो सब कुरा बुझेरै मलाई प्रश्न सोधिरहनुभएको छ । म ड्याडीलाई ुगुड लकु भन्न चाहन्छु । सायद राम्रै गरेर जानु होला ।
सानुबा गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि समस्यामा हुनुहुन्छ स्वास्थ्य स्थिति पनि कमजोर हुँदै गएको छ । उहाँले पनि पुरानो गल्ती सच्याउनु होला भन्ने लाग्छ र एउटा राम्रो बाटोमा देशलाई लानु होस भन्ने कामना गर्न चाहन्छु ।
तपाईले आफ्नो भाई सिद्धार्थलाई पनि साथसाथ लिनुभएको छ के तपाईको भाई त्यहाँ पुग्नुमा तपाईकै योगदान हो ?
-उसले धेरै संघर्ष गर्नुपरेको थियो । मेरो भाई भएकाले मात्र त्यहाँ पुगेको होइन । उसले चलचित्र समेत बनायो । फिल्म चलेन तर ुपफरमेन्सु राम्रो थियो ।
तपाईले नै बनाएको फिल्म पनि त छ नि ?
-पैसा असुल भन्ने चलचित्र प्रोड्यूस गरेको हुँ । तर त्यसमा मैले पैसा गुमाए हास्दै कति चाहिँ म भन्दिन । फेरि म त्यो काम गर्दैछु ।
तपाईले अस्लिल चलचित्रमा भूमिका निर्वाह गरेको चर्चा पनि सुनियो नि ?
-त्यो हल्ला ममाथिको अन्याय थियो । मैले त्यस विरुद्ध कानूनी बाटो लिए झगडा पनि गरेको थिए । त्यो मेरो चरित्र हत्या गर्ने प्रयासका लागि गरिएको हल्ला हो ।
अनि तपाई मदिरा र धुम्रपानमा लिप्त हुनुहुन्छ पनि भनिन्छ ?
-त्यो अरुको कुरा हो । सत्य चाहिँ के हो भने कोही कोही मानिसलाई धेरै नै बद्नाम गर्ने प्रयत्न गरिन्छ । कसैले चाहिँ कसैको हत्या नै गरे पनि त्यो घट्ना लुकाएर जोगाइन्छ । तर म दैनिक कति मदिरा पिउछु या चुरोट पिउछु भनेर तपाई या अरुलाई बताउन जरुरी ठान्दिन । यो कहिल्यै बताउने पनि छैन व्यक्तिगत कुरा हो । तर म अस्वीकार गर्दिन कि पार्टी या सभासमारोहमा लिदै लिन्न ।
Post by: tundikhel on October 26, 2009, 08:24:44 AM
Post by: tundikhel on October 26, 2009, 08:25:29 AM
Post by: tundikhel on November 05, 2009, 07:17:40 AM
मुम्बई, कात्तिक १९ (एजेन्सी)- बलिउडका करियर समाप्त भएको मानिएकी नेपाली अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले फेरि एकपटक ठूलो ब्यानरको फिल्म पाएकी छन्। संजयलिला भंसालीले निर्माण गर्न लागेको नयाँ फिल्ममा मनिषाले मुख्य भूमिका निभाउने भएकी छन्।
'हम दिल दे चुके सनम', 'देवदास' र 'ब्ल्याक'जस्ता हिट फिल्मका निर्देशक भंसालीको पहिलो फिल्म 'खामोशी'मा पनि मनिषा मुख्य भूमिकामा थिइन्। त्यसको तेह्र वर्षपछि भंसालीले मनिषालाई दोहोर्‍याएका हुन्।
'माई फ्रेन्ड पिन्टो' नामक यो फिल्मको निर्देशन राघव दारले गर्नेछन्। फिल्ममा मनिषासँग प्रतिक बब्बर पनि मुख्य भूमिकामा हुनेछन्। भंसाली आफैले निर्देशन गरेको फिल्म 'गुजारिश' पनि निर्माणमा छ। यो फिल्ममा ऋत्विक रोशन र ऐश्वर्या रायले अभिनय गरेका छन्।
मनिषाले अभिनय गरेको दिप्ती नवलको फिल्म 'दो पैसे की धुप, चार आने की बारिस' पनि प्रदर्शनको क्रममा छ।
Post by: hindenburg on December 01, 2009, 11:23:40 AM
Yeshko porn video post garam na sathi.....
Post by: blinked on December 07, 2009, 05:22:59 PM
mailey pani yesko porn video ayo bhanney halla suney ko thiey
Post by: kumart on December 19, 2009, 12:02:19 AM
Post by: tundikhel on December 19, 2009, 11:17:19 AM
मनिषाले फेरी नेपाली फिल्म खेल्ने
काठमाडौं, ४ पुष (दैनिकी)
धेरै समय सम्म नेपाली चलचित्रबाट टाढिएको नायिका मनिषा कोईरालाले फेरी एक पटक नेपाली चलचित्र खेल्ने भएकी छिन्। चलचित्र फेरी भेटौलामा नायिकाको रुपमा फिल्म जीवन शुरु गर्ने मनिषाले त्यपछी धेरै हिन्दी चलचित्रहरुमा नायिका भई खेलेको थिईन। तर केहि समय देखी हिन्दी चलचित्रमा देखिन छोडेकी थिईन।
चलचित्र युग देखी युग सम्मका निर्देशक दिपेन्द्र खनालका अनुसार उनले निर्देशन गर्न लागेको यस चलचित्रमा राजेश हमाल तथा मनिषा कोईरालाको जोडी हुनेछ। यस चलचित्रको नामाकरण भने हालसम्म गरिएको छेन। यस चलचित्रमा निर्देशक दिपेन्द्र खनाल तथा डा दुर्गा पोखरेलले दगानी गर्ने भएको छ। निर्देशक दिपेन्द्र खनालका अनुसार सन २०१० को जनवरीदेखी यस चलचित्रको छायाकंण शुरु हुनेछ। यस चलचित्रमा हरी लम्साल तथा राजु सिन्हाको संगितमा दुई दुई गाना तथा सुरेश राईको संगितमा एउटा गाना राखिने छ।
Post by: kurakani on February 06, 2010, 12:00:12 PM
Post by: tundikhel on February 11, 2010, 01:06:15 PM
Post by: tundikhel on February 11, 2010, 01:06:38 PM
Post by: tundikhel on February 16, 2010, 12:23:04 PM
Title: Manisha Koirala - Interview
Post by: tundikhel on February 16, 2010, 12:28:09 PM
Post by: tundikhel on February 16, 2010, 12:33:22 PM
Post by: tundikhel on March 07, 2010, 12:37:07 AM
Post by: tundikhel on April 08, 2010, 10:57:48 PM
Post by: tundikhel on April 08, 2010, 10:58:54 PM
Post by: tundikhel on April 10, 2010, 01:01:39 PM
Post by: winkantipur on April 30, 2010, 11:44:41 PM
Post by: tundikhel on August 24, 2012, 07:12:09 AM
Post by: tundikhel on September 16, 2012, 10:38:36 PM
Post by: tundikhel on November 19, 2012, 02:34:51 PM
Post by: tundikhel on December 03, 2012, 12:47:55 AM
Post by: tundikhel on December 11, 2012, 02:19:18 PM
Post by: tundikhel on December 11, 2012, 02:20:49 PM
Post by: tundikhel on December 12, 2012, 01:51:10 AM
Post by: tundikhel on December 12, 2012, 01:51:47 AM
Post by: tundikhel on January 13, 2013, 05:20:30 AM
Post by: tundikhel on July 26, 2013, 09:05:07 PM
Post by: tundikhel on August 04, 2013, 08:22:12 PM
Post by: tundikhel on September 25, 2013, 07:39:54 PM
Post by: tundikhel on January 30, 2014, 05:19:20 AM
Post by: tundikhel on August 18, 2014, 03:58:14 AM
Post by: anand on March 26, 2015, 12:10:46 AM
Post by: anand on March 26, 2015, 11:25:33 AM
Post by: anand on March 31, 2015, 03:21:44 AM